NamasteNEPALI.com: खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डलका अगाडि राखेप सदस्य-सचिव केशव विष्ट दुई युवतीसँग आपत्तिजनक अवस्थामा !
खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डलका अगाडि राखेप सदस्य-सचिव केशव विष्ट दुई युवतीसँग आपत्तिजनक अवस्थामा !
चैत्र २३, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव विष्ट एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । उनी एमाले सुनसरीका नेता समेत हुन् । अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्री पनि एमालेकै सत्यनारायण मण्डल छन् । एउटै पार्टीका भएकाले यी दुईबीचको सम्बन्ध निकै राम्रो हुनुपर्ने हो । तर मन्त्री र सदस्यसचिव सम्बन्ध भने निकै तिक्ततापूर्ण छ । सदस्य सचिव विष्टको कार्यशैलीबाट मन्त्री मण्डल चरम रुष्ट छन् । पछिल्लो समय घटेको एउटा रमाइलो घटनाले मन्त्री मण्डल र सदस्य सचिव विष्टबीचको सम्बन्ध झनै बिग्रिएको छ ।
कुरा पुरानै भए पनि अहिले आएर खुलेको छ । गत पुसको पहिलो साता मन्त्रीलाई लिएर सदस्य सचिव केशव विष्ट पोखरा गएका थिए । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कार्यक्रममा दुवै जना पोखरा गएका थिए । क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको स्वागत कार्यक्रमपछि दुवै जनालाई एउटै होटलमा राखेका थिए । होटलमा मन्त्री मण्डलले खेलकुद क्षेत्रको बारेमा बिष्टसँग छलफल गर्न खोजेका थिए ।
बिष्ट एक्कासी मोवाइल बन्द गरेर गायव भए । संयोग कस्तो भएछ भने मन्त्री मण्डल झुक्किएर बिष्ट बसेको कोठाको ढोका खोल्न पुगेछन् । जहाँ सदस्यसचिव बिष्ट दुई युवतीसँग आपत्तिजनक अवस्थामा थिए । तत्कालै मन्त्री मण्डलले उनलाई गाली गर्दै ढोकाबाटै फर्किए । यो कुरा मन्त्री मण्डलले कर्मचारीलाई सुनाए । बिष्टको हर्कतले आफू लज्जित भएको उनले बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्री मण्डल र सदस्य सचिव बिष्टबीच बोलचाल छैन । राखेपमा एक अर्व बजेट हुँदा पनि केही काम नगरेको र पार्टीलाई बदनाम हुने काम मात्र गरेको भन्दै मन्त्री मण्डल बिष्टसँग रुष्ट छन् । विष्टलाई एमालेका तत्कालिन खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले नियुक्त गरेका थिए । जुन विषयमा सुरुमै विवाद भएको थियो । सोही प्रकरणका कारण मन्त्री पौडेलको पद नै गएको थियो ।
काम भन्दा बढी घुमघाम र मोजमस्तीमा रमाउने भएकाले बिष्टको कार्यशैलीप्रति एमालेकै खेलकुद संगठनका पदाधिकारीहरुले उनीविरुद्ध पार्टीमा उजुरी दिएको समाचार दृष्टि साप्ताहिकले छापेको छ । तर एमाले नेता माधव नेपालको साथ पाएका बिष्टले कसैलाई पनि टेर्ने गरेका छैनन् ।
Labels: AMAZING, MAIN, NEPAL, NEWS, PASSION